I-ACLU ikwaxhasa iApple kumlo wayo ne-FBI | IPhone iindaba
La I-American Civil Liberties Union, Waziwa ngcono njenge ACLU, ugcwalise ngokubhala apho ivakalisa inkxaso yayo kwiApple kwimbonakalo abanayo ngoku noRhulumente wase-US. Umbutho ubanga ukuba isoftware i-FBI ifuna ukuba inkampani yaseCupertino yenze ukuba ivumele abaphandi ukuba bagqithe kwizinto ezikhuselekileyo kubandakanya ukoyiswa kwegunya eliza kushiya amakhulu ezigidi zabasebenzisi bevelele kuhlaselo lokhuseleko.
I-ACLU ngumbutho wamva nje oza kuthetha ngengxoxo yezokhuseleko neyangasese, kwaye ikwenzile oko ngokuxhasa iApple, ke ngoku ukujoyina uGoogle, Microsoft (Akunjalo uBill Gates), owayesakuba ngumgqatswa kamongameli uRon Paul, umsunguli we-WhatsApp uJan Koum kunye ne-CEO ye-Facebook UMark Zuckerberg. Kodwa kukwakho nabantu abacinga ukuba uTim Cook kunye nenkampani kuya kufuneka bangene, oyena mntu ubalaseleyo wabagqatswa abathandayo kubongameli be-United States, u-Donald Trump, owade wafuna ukuba boyise i-Apple (into awayenzayo kwiselfowuni).
I-ACLU ikholelwa ekubeni urhulumente ugqithisile
Eli tyala alikho malunga nefowuni yodwa, lithetha malunga negunya likarhulumente lokuguqula iinkampani zobuchwephesha ngokuchasene nabasebenzisi bazo. Ukhuseleko kunye nemfihlo yezigidi zabantu baseMelika zixhomekeke kwintembeko esiyibeka kwiinkampani ezenza izixhobo zethu. Ukuba urhulumente uyaphumelela ekunyanzeleni iinkampani ukuba zixhaphaze ukuthembela kwabasebenzisi bazo, iya kuthi ibuyise ukhuseleko lwedijithali kunye nemfihlo kwiminyaka emininzi.
Isishwankathelo se-ACLU sigxile kumanqaku amane esicelo esenziwe nguRhulumente wase-United States ukukhusela ukusetyenziswa kwe Wonke umthetho obhalwayo Ngenjongo yokunyanzela iApple ukuba yenze isoftware ekhethekileyo:
I-Apple ayinalo okanye alulawuli ulwazi olucelwe ngurhulumente, kwanele ukuba lakhutshwa ngaphandle kwebhokisi ukuba bangavumi ukusebenzisana.
Ukwenza isoftware urhulumente afuna ukuyila iApple "kuluxanduva ngokugqithileyo" kwinkampani.
Abaphandi abakhange babonakalise ukuba ulwazi abaza kulifumana luyimfuneko.
Imithetho iyakwalela ngokuthe ngqo okwenziwa ngurhulumente.
Kucacile ukuba eli bali liseneziqendu ezininzi eziseleyo, kodwa iApple sele iphumelele umlo wayo wokuqala eNew York. Ngethemba lokuba uTim Cook kunye nenkampani bayaqhubeka ukuphumelela iimfazwe ezizayo kunye nemfazwe, kwidatha yethu kunye nemfihlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-ACLU ikwaxhasa iApple kumlo wayo ne-FBI
I-iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy S7: Ukuxhathisa kwamanzi [Ividiyo]